Midowga Yurub oo ka taageeraya dowladda dhinaca dhisidda ciidamada | Sagal Radio Services
Midowga Yurub oo ka taageeraya dowladda dhinaca dhisidda ciidamada
Danjiraha midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Michele Cervone d’ Urso, ayaa sheegay in ay dowladda Soomaaliya ka taageerayaan dhinacyo ay ka mid tahay ciidamada, si looga hor-tago xagjirnimada, loona joojiyo weerarada qaraxyada ah ee ay geysanayaan kooxda al-Shabaab.
Danjiraha Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Michele Cervone d’ Urso iyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isku salaamaya aqalka madaxtooyada, xilli uu bishii November uu booqday ergeygu Muqdisho.
Michele Cervone d’ Urso, ayaa Nayroobi ka sheegay in uu xasuusan yahay qaraxii seddexdii Diseember ee sanadkii 2009, kaas oo ay ku dhinteen arday qalan-jabineysay, macallimiin jaamacadeed, wasiirro, wariyayayaal, waaliddiin iyo dad kale, kadib markii xaflad ay ku qalan jabinayeen ardey ka baxeysay kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Banaadir la isku qarxiyay.
Waxa uu Michele sheegay in si looga hor tago ficillada nuucaasi ah uu midowga Yurub ka taageerayo dowladda Soomaaliya inay ciidamadeeda dhisato.Waxa uu weerarkii seddexdii Diseember ku tilmaamay in uu ahaa mid fuleynima ah oo cadowtooyana ay ku dheehneyd.
Laakiin waxa uu weerarkaasi dhiira-galiyay buu yiiri kaliya dadkii doonayay in dhibaatada lagu dhammeeyo nidaamka siyaaasadeed, oo ayna guul dareysteen kooxihii qalalaasaha waday, sida uu yiri ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya.
Dhinaca kale Michele Cervone d’ Urso, ayaa sheegay in sanadka soo socda ay rajeynayaan in ay si joogto ah xafiis uga furtaan Muqdisho, oo haddii ay dhinaca nabad galyadana wax iska badalaan ayba safaaraddooda Muqdisho ka furan doonaan.